कलिउड-Nepali online news portal
अाँशुकाे भेलसँगै गायक हरि पुन मगर
रोल्पा जिल्लामा जन्मेर लामो समय देखि काठ्माडौंमा संघर्ष गर्दै आएका हरि पुन मगरले यतिबेला वियोगान्त आधुनिक गीत लिएर दर्शक श्रोता माझ आएका छन् । आन्तरिक असमझ्दारीका कारण मायाँमा धोका दिने कुरालाई उक्त गीतमा राम्रोसित उद्घाटन...
आउन त जहाज नै चढी आए बाबा ! नरुनु बाकसमा सडी आए बाबा !! न खाइ न लाइ जन्माएर हुर्कायौ ! कहील्यै नउठ्ने गरी लडेर आए बाबा !! सपना र चाहाना सब खरानी भयो ! बाकस भित्र गुम्सिएर नेपाल...
यसपाली कलाकारहरूको होली
आईतबार काठमाडौं सहित देशका विभिन्न ठाउँमा मनाईयो । बर्षभरीको पीडा मेटाउने, कलरसँग रमाउने अनि दु:ख र बैममनस्यता त्याग्दै आत्मितया बाँड्ने पर्वको रुपमा मनाईने होलीले धेरैलाई रंगायो । आईतबार काठमाडौंका सडकदेखि महलसम्म प्राय: अनुहार रंगले पोतिएका...
प्यूठानमा जन्मेकी पवित्रा थापापछि बुटवलमा बसाइ सरेपछि पढाइँसँगै नृत्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी २ वर्षको संघर्षपछि हिट मोडल बन्न सफल भएकी छिन् । उनी भन्छिन् अबको १–२ वर्षमा नेपालको चर्चित मोडल बनेर...
छायाँकन सुरु नहुँदै लफडामा ‘प्रेमगीत २’
आउँदो सोमबारबाट फिल्म ‘प्रेमगीत २’ फ्लोरमा जाँदैछ । तर छायाँकनको पुर्व सन्ध्यामा खटपट आएको छ कि निर्माण टिम र संगीतकारबीच ब्रेकअप भएको छ । ‘प्रेमगीत २’ को लागी गीत संगीतको जिम्मा पाएका चर्चित संगीतकार अर्जुन...
मोटी नभन्न आग्रह गर्ने जल शाह भन्छिन्- `अनमोल भन्दा भुवन ह्याण्डसम`
नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा कुनै समय जल शाहको निकै लोकप्रियता थियो । धेरै सफल फिल्ममा अभिनय गरेकी कुशल अभिनयकी धनी जल शाहले नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा भविष्य देखिनन् र अमेरिकाको यात्रा तय गरेकी थिईन् । चर्चामा रहंदा...
नायिका करिश्मा मानन्धरलाई २०७१ सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । हरितारा पुरस्कारको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले २०७२ सालको पुरस्कार सञ्चारकर्मी शान्तिप्रिय एवं डिजाइनर सुन्दर श्रेष्ठलाई दिने निर्णय...
जन्मदिनमा आफ्नो थरमा निशाले थपिन मल्ल !
अभिनेत्री निशा अधिकारीको जन्मदिन । फ्लोरमा रहेको फिल्म ‘कुम्भकरन’को सेटमा नै निशाले ३० औं जन्मदिन मनाउँदै छिन् । पश्चिम नेपालको प्यूठान जिल्लामा अहिले फिल्मको गीतको छायाँकन चलिरहेको छ । ‘कुम्भकरण’ पश्चात फिल्म ‘रोमियो’मा अनुबन्ध भएकी...
के ‘अनलक्की’ वन्दैछिन् वेनिशा ?
अब, के वेनिशा हमाललाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी ‘अनलक्की’ नायिका भन्न सकिन्छ ? यदि, उनले सोचे जस्तो भएको भए उनको करिअरमा अहिलेसम्म धेरै चमकता आइसक्थ्यो । उनी अभिनित चलचित्र ‘किङ’ आजबाट रिलिज भएको भए, वेनिशा संभवत...
शर्मिलाको ठुम्कामा मर्ने हजार
शर्मिला बर्देवाको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। डेढ दशकदेखि बेलायतमा बस्दै आएकी बर्देवाले लामो समयपछि नयाँ गीत रेकर्ड गराएकी हुन्। कोही भन्छन् मलाई तिमी मखमली फूल हौ, कोही भन्छन् मलाई तिमी सृजनाकी मूल हौ । कोही भन्छन् तिमी...